निशानाछापका मुख्य डिजाइनर राजभण्डारीको ‘पाश्चात्य कलाः संक्षिप्त इतिहास’ विमोचन
नेपाल सरकारको निशानाछापका मुख्य डिजाइनर नवीन्द्रमान राजभण्डारीले लेखेको पुस्तक ‘पाश्चात्य कलाः संक्षिप्त इतिहास’ दोस्रो भाग सार्वजनिक भएको छ । कलाकार तथा लेखक राजभण्डारीको सो पुस्तक शनिबार लाजिम्पाटस्थित सिर्जना कलेज अफ फाइन आर्टस्मा पुस्तक विमोचन भएको हो ।
प्रा.डा. अभि सुवेदी, अग्रज कलाकार तथा कलालेखक मदन चित्रकार, न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा नेपालका पूर्वसहायक स्थायी प्रतिनिधि डा. विनोद विष्ट, पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल, साहित्यकार तथा चलचित्र निर्देशक प्रकाश सायमी र कवि डा. गीता थपलिया त्रिपाठीले उक्त कृतिको संयुक्त रुपमा विमोचन गरेका थिए ।
यस्तै, कार्यक्रममा प्रा.डा. अभि सुवेदीले नेपाली भाषामा विश्वकलाका विभिन्न पक्षलाई समेटेर निकालिएको यो पुस्तक कलाकार, विद्यार्थी तथा कलाप्रति रुचि राख्ने जोकोहीका लागि उयपोगी हुने विचार व्यक्त गरे । उनले भने, ‘पश्चिमी कलाका बारेमा खासै नेपालीमा पुस्तक लेखिएको छैन । यसरी सिस्टमेटिक ढंगले पनि लेखिएको छैन । हामीले विश्वका कलाका प्रदर्शनी हेर्न पाउँदैनौँ । पुस्तकबाट ती कला र कलाकारका बारेमा थाहा पाउने हो । यस दृष्टिले यो पुस्तक निकै महत्वको रहेको छ ।’
डा. विनोद विष्टले पुस्तकले पश्चिमी कलाको इतिहासलाई उजागर गरेको बताए । उनले लेखकले कलाका विभिन्न शैलीलाई तथ्यपरक ढंगले पुस्तकमा चित्रण गरेको विचार व्यक्त गरे । पूर्वसचिव तथा लेखक शरदचन्द्र पौडेलले पुस्तकमा कलाको क्रमिक विकासलाई उतारिएको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘पुस्तक नेपाली कला तथा साहित्य क्षेत्रका लागि महत्व राख्ने गरी प्रकाशित भएको छ ।’
कार्यक्रममा डा. गीता थपलिया त्रिपाठीले कलाका विभिन्न वाद बुझ्नका लागि पुस्तक उपयोगी रहेको बताइन् । भाषिक पक्ष राम्रो रहेको बताउँदै उनले कलालाई नजिकबाट नियाल्न र यसका विविध पाटाका बारेमा जान्न पुस्तक सहयोगी हुने विश्वास लिएको बताइन् । पुस्तकका लेखक नवीन्द्रमान राजभण्डारीले कलाका बारेमा जान्न चाहनेका फाइदा हुने विश्वासका साथै कृति प्रकाशित गरेको बताए । उनले भने, ‘नेपाली कलाकार, विद्यार्थी तथा कला पारखीका लागि पुस्तक एउटा पाठ्यसामग्री हुने विश्वास लिएको छु ।’
सिर्जना कलेज अफ फाइन आर्टले प्रकाशन गरेको पुस्तकको मूल्य एक हजार रहेको छ । राजभण्डारीले राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनीमा प्रथम पुरस्कार पाएका थिए ।
प्रकाशित मिति : फागुन २४, २०७७ साेमबार १८:२८:१३,